JINGYE Air Bubble Ny milina fanasan-damba dia misy maotera mifehy haingana, boaty fanaraha-maso herinaratra, rafitra fitifirana rano, tanky fitahirizana rano namboarina.
Ny milina iray manontolo dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, mateza, fitaovana akora tsy ho simba, mba hahatratrarana ny haavon'ny fanadiovana, ny fitehirizana ny rano, ny fitehirizana ny rano, ny fitombon'ny fitaovana, ny vokatra azo antoka ary ny vokany hafa. Ny fomba fanasan-damba mahazatra. Ny masinina dia mandray ny fikorianan'ny rano avo lenta sy ny fitaovana mamokatra poulta mba hisy fiantraikany amin'ny velaran'ny zavatra diovina. Ny angovo ateraky ny fipoahan'ny bubble mifandraika amin'ilay zavatra dia handray anjara amin'ny fiantraikany sy ny fikosohan-doha amin'ny ambonin'ny zavatra ho diovina. Ny ambonin'ilay zavatra hodiovina dia hodiovina amin'ny borosy.
Ny milina fanasan-drivotra JINGYE Air Bubble dia mety amin'ny fanadiovana ireo voankazo sy legioma, ampiasaina amin'ny fanadiovana legioma sy voankazo, toy ny laisoa, epinara, seleria, daty, frezy, paoma, paiso, sns.
1.Model: JYQXQ-3000, JYQXQ-4000, JYQXQ-5000, sns;
3.Voltage: 220/240/380 / 415V, namboarina;
4. Karazana fanadiovana: fanasan-drivotra amin'ny rivotra, fanosehana rano faneriterena;
1. Mitsitsia rano, mitsitsia herinaratra, mitsitsy fotoana, madio ary madio ara-pahasalamana.
2. Aza manimba legioma, avo lenta, faritra iasana kely, azo antoka sy azo antoka.
3. Fametrahana tsotra, fandidiana mora, fikojakojana mora, fanjifana angovo ambany.
Tabilao momba ny teknika
Teo aloha: Homogenizer